चिसोमा उखु किसान : मण्डलादेखि सुकुम्बासी बस्तीसम्म (भिडियो)- फिचर - कान्तिपुर समाचार
चिसोमा उखु किसान : मण्डलादेखि सुकुम्बासी बस्तीसम्म (भिडियो)
पुस १७, २०७६ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — बुधबार दिउसो १२ बजेको पारिलो घाम । चिनी मिलले पैसा नदिएर हैरान भएका सर्लाहीका उखु किसान ब्यानरसहित माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेका थिए । धर्नाको दसौं दिन आन्दोलनरत उखु किसानको संख्या थपिइरहेको थियो ।
किसानसँगै कानुन संकाय अध्यनरत केही विद्यार्थी पनि आन्दोलनमा सरिक भए । विद्यार्थीका हातमा भएको ब्यानरमा लेखिएको थियो 'म किसानको छोरी हुँ, किसान संघर्ष जिन्दावाद ।' १० जना विध्यार्थी थप भएपछि बुधबार आन्दोलनरत उखु किसानको संख्या बढेको देखिन्थ्यो । सातौं दिन (आइतबार) त्यहाँ पुग्दा किसानको संख्या कमै थियो ।
आन्दोलनमा साथ दिनेको संख्या बढेपछि उखु किसानको मुहार उज्यालो देखिन्थ्यो । त्यसमाथि मन्त्रालयमा बैठक जाने कुराले बुधबार उनीहरुको उर्जा बढेको थियो । आइतबार पुस १३ गते मण्डलामा उखु किसान ब्यानर बोकेर उभिएका थिए । यसपटक भने उनीहरु सबैजना चौरमा बसेका रहेछन् । अगाडि पंक्तिमा उखु किसान थिए । उनीहरुका पछाडि विद्यार्थी । आइतबार यहीं धर्नामा भेटिएका रौदी महतो पनि चौरमै भेटिए ।
सोधें- कस्तो हुनुहुन्छ ? 'चिसो लाग्यो, हातगोडा दुखेको छ,' उनले परिचितलाई झैं आफ्नो पीडा सुनाए । चिसोले सहर नै कठ्यांग्रिइरहेको काठमाडौंमा रौदी भने धोतीमा थिए । जिउमा एउटा ज्याकेट थियो । पुसको चिसोले पक्कै सताउने नै भयो । उनी अहिले पनि सानेपाकै कवाडी गोदाममा बस्दैछन् । १० दिनदेखि बिहानको ११ बजे मण्डला आउने अनि ४ बजे गोदाम फर्किने गर्दै उनको दैनिकी बित्दैछ । बुधबार सरकारबाट सकरात्मक संकेत आउनेमा यो किसान समूह आशावादी थिए ।
गफगाफ अघि बढाउँदै गर्दा उनीहरु मन्त्रालय जान तयार हुन थाले । त्यतिकैमा मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अध्यक्ष एवं सर्लाहीका संघीय सांसद राजेन्द्र महतो आइपुगे । भूईंमा एकटक घोरिइरहेका आन्दोलनरत किसानहरु महतोलाई देखेर जर्‍याकजुरुक उठे । मिडियाका क्यामेरा राजेन्द्रतर्फ तेर्सिए । किसानको अनुहार झनै उज्यालो भयो ।
सबै किसानलाई साक्षात्कार गर्दै मिडियालाई राजेन्द्रले भने, 'किसानले आफ्नो व्यापारको मूल्य तोक्न नसक्ने । आफ्नो व्यापारको मूल्य अरुले तोकिदिनु पर्ने । पहिलो बिडम्बना त यही हो । उखु किसानलाई भुक्तानी दिलाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।'
सबैको ध्यान राजेन्द्रतर्फ थियो । किसान महेन्द्र महतो भने भूईंतिर हेर्दै टोलाइरहेका थिए । यस्तो लाग्थ्यो उनलाई आफ्ना सांसद महतोको ऐक्यबद्धतामा कुनै चासो थिएन । सायद आफ्नो उखुमा लगाएको मिहेनत सम्झिरहेका थिए उनी । उनको अनुहार निन्याउँरो थियो । आफ्नो समस्या पार नहोला भन्ने डर थियो सायद मनमा ।
घाम बादलसँग लुकामारी खेल्न थालिसकेको थियो । आफ्ना कुरा राखेर महतो बिदा भए । आन्दोलनलाई समर्थन जनाइरहेका विद्यार्थी समूहले पनि बिदा माग्यो । चिसो हावाले मण्डलामा भएका किसानलाई पनि चिस्याइरहेको थियो ।
३ बजेतिर किसान समूह मन्त्रालय जान तयार भयो । आफ्ना मागहरु कापीमा टिपेर उनीहरु के मन्त्रालयतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका थिए एकजनाले प्वाक्क बोलिहाले 'तिमीहरुको बुद्धी छैन । अब त्यो राजेन्द्र आएर के गर्‍यो । एउटा फोटो खिचायो तिमीहरुसँग। अब भोली चुनाव भयो भने यही फोटो देखाएर भोट माग्न आउँछ । के सहयोग गरे तिम्रा नेताहरुले ?'
केही टाठाबाठा किसानले आफूहरु कुनै पार्टीको निर्देशनमा नचल्ने बताउँदै ती व्यक्तिलाई पन्छाउन खोजे । एकजना किसानले जवाफ दिए, 'हामी कुनै पार्टीका होइनौं । हाम्रो समस्या उखुबाट पाउनुपर्ने पैसा हो । हामी त्यही भुक्तानीका लागि यहाँ छौं ।' त्यसपछि भने उनी छेउ लागे। आन्दोलनरत केही टिम मन्त्रालयतर्फ प्रस्थान गरे । केही किसान भने नारा लगाउन थाले, 'किसानको माग पूरा गर, किसानको माग पूरा गर ।' चिसो बढेपछि हावा छेक्ने झाडीछेउ बसेर दृश्य नियाल्न थालें ।
त्यसपछि नेविसंघका विद्यार्थी टोली आन्दोलनमा मिसिए । पलेटी कसेर सबैजना त्यहाँ भएका किसान छेउ बसे । त्यहाँ बसेको ५ मिनेटमै टोलीका एक विद्यार्थी अगाडि गएर फोटो खिच्न थाले । नेविसंघका टोली गम्भीर मुद्रामा क्यामारेतर्फ केन्द्रीत भए । माहोल हेर्दा लाग्थ्यो, उनीहरु त्यहाँ फोटो खिच्नकै लागि आएका थिए । किसान महेन्द्र महतो परपरसम्म गुडिरहेको गाडी गुडेको हेरिरहेका थिए । उनको ध्यान अगाडि तेर्सिएको मोबाइलले भंग गर्न सकेको थिएन । एकटक माइतीघरबाट कोटेश्वर लाग्दै गरेको गाडीतर्फ उनको ध्यान थियो । आन्दोलनमा बसेको १० दिनदेखि उनका अगाडि क्यामेरा तेर्सिएका छन् । न्याय त कहाँ हो कहाँ !
फोटो खिच्ने क्रम चलिरह्यो । एक विद्यार्थीले महेन्द्रलाई मोबाइलको क्यामेरातिर हेर्न भने । अँध्यारो अनुहारमै महतोले मोबाइलतिर हेरिदिए । फोटो खिच्ने समय सकियो । सबैजना फेरि भूईंमै बसेर एकअर्कासँग गफिन थाले । खै के कुरा भयो, बिहानदेखि निन्याउरो अनुहार बनाएर बसिरहेका महतोको अनुहार धपक्कै बल्यो । छेउको विद्यार्थीसँग उनी मुसुक्क मुस्काए । दृश्य हेर्दा आनन्द लाग्यो । उखुको पैसा भुक्तानी पाए सायद महतोसँगै आएका सम्पूर्ण किसानको अनुहारमा यस्तै खुशी छाउँथ्यो होला ।
तर, उनको अनुहारमा हाँसो धेरैबेर टिकेन । उनी फेरि झोक्रिएर बस्न थाले । ६५ वर्षिय महतोलाई मन्त्रालयबाट कस्तो समाचार आउला भन्ने तनाव थियो सायद । घर परिवारको चिन्ता त छँदै थियो । ३ लाख भुक्तानी पाउँला नपाउँला उनलाई थाहा थिएन ।
किसानको पीडालाई समर्थन जनाएको भावभंगी गर्दै समर्थनमा आएका एकजना नेताको हुलिया भएका व्यक्तिले भनिहाले, 'तपाईंहरु आफ्नो माग पूरा नहुँञ्जेल घर नफर्कनुस् । हामी तपाईंको साथमा छौं । भोलीदेखि तपाईंहरु हामी पनि आन्दोलनमा बस्छौं । आन्दोलन चर्काउनुपर्छ ।' दिनभरी त्यही चौरको चिसोको वास्तै नगरी बसिरहेका किसानहरु ती व्यक्तिलाई चासो दिन थाले । ती व्यक्ति ठूल्ठूला कुरा गरेर बसिरहे ।
४ बज्नै लाग्दा फेरि टोपी लगाएर ४/५ जनाको समूह हतारिँदै किसानतर्फ पुग्यो । दौरा सुरुवाल अनि शीरमा टोपी लगाएका एक जवानले किसानलाई भन्नथाले, 'तपाईंहरु टोपी लगाएर आन्दोलन गर्नुस् । तल धोती नै लगाउनुस् तर शीरमा टोपी लगाएर आन्दोलन गर्नुस् । हामी तपाईँको साथमा हुन्छौं ।'
जेहोस् किसानहरुसँग दिनभर मण्डलामा बस्दा यस्ता थुप्रै पात्रहरुसँग ठोक्किए । कसैले टोपीको नाममा, कसैले साथ बसिदिएरै, कसैले न्यायको सपना बाँडेर गए । तर मण्डलाको मैदानमा बिहीबार विभिन्न राजनैतिक दलका चर्तिकला देख्दा लाग्यो, पीडित आफ्नै पीडामा छन्, उनीहरु भने त्यही पीडामाथि राजनीति गर्दैछन् ।
४ : ३० तिर मन्त्रालयबाट किसानको समूह बैठक सकेर आयो । चिसो भूईंमा सकरात्मक सन्देश पर्खेर बसेका महेन्द्रलगायतका किसान उठेर मन्त्रालयबाट फर्केकाहरुसँग कुरा गर्न थाले । सरकारले मा ७ गतेभित्र सबै रकम भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएको थियो । माघ ७ गतेको समयबारे थाहा पाउनासाथ समय लम्बिएको भन्दै कति किसान निराश भए । कोही भने घरतिर फोन गरेर माघ ७ मा सबै रकम भुक्तानी हुने सन्देश दिइरहेका थिए ।
मेरो आँखा फेरि रौदीमै पर्‍यो । फोनमा ठूलो आवाजमा उनी बोल्दै थिए, '७ गतेको मिति दिएको छ सरकारले। अब हाम्रो पैसा लिएरै घर फर्कन्छु ।' उनी आशावादी सुनिए ।
मण्डलादेखि सुकुम्बासी बस्तीसम्म
सरकारले माघ ७ को मिति दिएपछि किसानहरुमा आशा पलाएको थियो । सबै आफ्नो बसाई क्षेत्रतर्फ फर्किए । हरेन्द्र यादवको मुहारमा भने अझै उज्यालो छाएन । उनी साथीसँग गुनासो गर्दै थिए, 'यतिका दिन अब के खाएर बस्ने हो ? अब त साथीलाई पनि के भन्ने हो ?' काठमाडौंमा उनको नजिकको आफन्त कोही छैन । उनलाई काठमाडौंमा बस्न नै चिन्ता छ ।
हरेन्द्र वागमती किनारमा रहेको टेकुनजिक वाग्मती करिडोर छेउको सुकुम्बासी बस्तीको एउटा झुपडीमा १० दिनदेखि रात काट्दै आएका छन् । हरेन्द्रको छेउमा गएर पीडा सुन्दै गर्दा उनले आफू बस्दै गरेको झुपडीमा निम्तो दिए । ६ बजेतिर मण्डलाबाट हामी वाग्मतीको सुकुम्बासी बस्तीतर्फ पैदल गयौं ।
बाटोमा उनी सुनाउँदै थिए, '१० दिनदेखि साथीको सानो झुपडीमा हामी आन्दोलनरत ५/६ जना साथी बस्दै आएका छौं । चिसो समय, ओढ्ने ओछ्याउने छैन । २/४ हजार लिएर काठमाडौं आएको त्यो पनि सक्कियो । अब माघ ७ सम्म के खाएर बस्ने हो । न काम छ न गोजीमा पैसा ।'
अबको दिन कसरी काट्ने उनलाई यही कुराले सताइरहेको छ । हरेन्द्रलाई बाटोको धुलोको वास्ता थिएन । सर्लाहीमै छोडेर आएको परिवारको चिन्ताले उनलाई सताइरहेको रहेछ । लामो सास फेर्दै उनी भन्न थाल्छन्, 'बालबच्चा, बुढी अनि माँ सबै मलाई कुर्दैछन् । पैसा नलिइ त म जाँदै जान्नँ,' उनी दृढ देखिन्थे ।
३० मिनेटको हिँडाईपछि बस्ती पुग्यौं । ससाना झुपडीका बीच २ तल्लाको घर मुस्किलले देखियो। झुपडी वर केही मानिसहरु आगो तापिरहेका थिए । बालबालिकाहरु अँध्यारोमै खेलिरहेका थिए । बस्तीमा छेउमै रहेको वाग्मतीको दुर्गन्ध नाकमै ठोक्कियो । बस्तीका झुपडीबाहेकका ठाउँमा बत्ती कतै थिएन । त्यसैले बाटो पहिल्याउन गाह्रो पर्‍यो ।
वाग्मती किनारको साँघुरो बाटो हुँदै हरेन्द्रले आफू बस्दै आएको ठाउँ देखाए । झुपडी अव्यवस्थित देखिन्थ्यो । एउटै बल्बले कोठाभरी उज्यालो दिइरहेको थियो । भित्तामा ब्यागहरु झुण्ड्याइएको थियो । झुपडीमा आन्दोलनरत अरु साथी पहिल्यै आएर खाना पकाइरहेका रहेछन् । ग्याँसमा डेक्ची बसालिएको थियो, छेउमा तरकारी छरपस्ट । आलु, भन्टा, एक पोका दाल ग्याँस नजिकै राखिएको थियो । एउटा पलङ । अटाइनअटाइ ५ जना आन्दोलनरत किसानहरु त्यहाँ ढल्कँदै थिए । दिनभरी धर्ना बसेको शरीरलाई आराम त्यही झुपडीबाट मिल्थ्यो ।
पुसको चिसोमा ओढ्ने ओछ्याउनको अभाव । सिरक थिएन । पातलो तन्नामै उनीहरु रात काटिरहेका थिए। आन्दोलनमा हिँडेपछि हरेन्द्रको मात्रै होइन अन्य किसानको पनि गोजी रित्तिसक्यो । काम नभएपछि साथीकै भरमा त्यहाँ बस्दै आएका छन् ।
हरेन्द्रका साथी सामान्य काम गर्छन् । साथीलाई आफ्नै दैनिकी चलाउन गाह्रो छ । त्यसमाथि हरेन्द्रको समूह त्यहाँ बस्न थालेपछि रासनपानी बढ्यो । सुरु सुरुमा त साथीलाई रासनपानीमा सहयोग गर्थे हरेन्द्र । तर अहिले उनको समूहलाई कसरी अझै १५ दिन त्यहाँ बिताउने चिन्ता छ । 'कति दिन खाने साथीको ? अब त रासनपानी नै छैन । साथी नभएको भए मेरो पनि कोही छैन,' उनले सुनाए ।
अर्का एक किसान आक्रोश पोख्दै थिए ,'एकजना साथीले कमाउँछ । कतिञ्जेल यसरी खाने हो थाहा छैन । काठमाडौंमा खान बस्नलाई पानी चाहिन्छ, पिसाब गर्नलाई पैसा चाहिन्छ ।' त्यहाँ बसिरहेका कुनै किसानको १ लाख, कतिको डेढ लाख त कतिको ७० हजार अन्नपूर्ण चिनी मिलले दिन बाँकी छ।
हरेन्द्रले अन्नपूर्ण चिनी मिलबाट ७० हजार पाउन बाँकी छ । काठमाडौंमा बस्नलाई धौधौ परिरहेको बेला जाने ठाउँ कतै छैन। उनी आफ्नो सम्पूर्ण भुक्तानी लिएर घर फर्कन चाहन्छन् । त्यसैले चिसो रातमा, पैसा लिएर फर्केको सपना देख्छन् । उनलाई अब माघ ७ सम्म सरकारको नतिजा कुर्नुभन्दा त्यस समयसम्म काठमाडौंमै टिक्न गाह्रो परिरहेको छ ।
खाना पाक्यो । दिनभर भोक्कै बसेका किसान टिम खान खान बसे । प्रकाशित : पुस १७, २०७६ २०:३६
'सिद्धबाबा' लाई छोड्ने आदेश त्रुटीपूर्ण भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा
पुस १७, २०७६ प्रदीप मेन्याङ्बो
सुनसरी — आनुयायी महिला बलात्कार गरेको अभियोग लागेका ‘सिद्धबाबा’लाई सुनसरी जिल्ला अदालतले तीनलाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले विराटनगरस्थित उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
बलात्कार गरेको सबुत प्रमाण हुँदाहुँदै पनि प्रतिवादी सिद्धबाबालाई थुनामा राखी कारबाही गर्नु औचित्यपूर्ण नरहेको भन्दै जिल्ला अदालतले गिरीलाई तीन लाख धरौटी लिएर तारेखमा छाड्नु त्रुटीपूर्ण हुँदा आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । गत सोमबार सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले जबरजस्ती करणी मुद्धाका अभियुक्त गिरिलाई तीनलाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए ।
सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीका न्यायधिवक्ता गोकुल निरौलाका अनुसार जिल्ला अदालतको आदेशमा कानुन, प्रमाण र तथ्यमा आधारित नभएकाले थुनछेक बहसपछिको आदेशप्रति चित्त नबुझी प्रतिवादी सिद्धबाबा भनिने गिरीलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेर मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
घट्नास्थलमा रहेका साधकले दिएको बयानलाई जिल्ला अदालतले सिद्धबाबालाई सफाइ दिनेगरी अदालतको आदेशमा उल्लेख गरेकाले थुनछेकको प्रयोजनार्थ तत्काल प्रमाणका उचित र पर्याप्त मूल्यांकन नगरी सतही रुपमा प्रतिवादीकै पक्षमा प्रमाणको रुपमा लिइएको देखिदा उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको पनि जनाइएको छ ।
उच्च अदालतमा दर्ता गरिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त निवेदनको प्रतिलिपि अनुसार बराहक्षेत्र नगरपालिका–१ स्थित चतराधामको जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्य सेवा पिठ परिसर भवनको ५ वटा कोठा मध्ये उत्तर पश्चिमतर्फको कोठामा सिद्धबाबाले बलात्कार गरेको सोफाको समेत घट्नास्थल मुचुल्काको रुपमा स्थापित भएकोमा त्यस्तो प्रमाणलाई अदालतको आदेशले तत्काल प्राप्त प्रमाणको रुपमा नलिइ आदेश भएको स्पस्ट देखिएको उल्लेख छ ।
सरकारी वकिलले बिहीबार नै मुद्दा दर्ता गरेर दर्ता नम्बर लिएका थिए । तर बुधबार पनि ‘कल लिस्ट’ नआएपछि शुक्रबार उच्च अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग हुनसक्ने सरकारी वकिल गोकुल निरौलाले बताए । उनले भने, ‘शुक्रबार कैफियत प्रतिवेदन माग हुन सक्छ । त्यसमा धरौटीमा छोडने आदेश हुनुको कारण माग हुन्छ ।’
विवादै विवादमा ‘सिद्धबाबा’
‘सिद्धबाबा’ विरुद्ध बलात्कार मुद्दा दर्ता
प्रकाशित : पुस १७, २०७६ २०:२८